Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ama-60% amaMelika athi iMaski zilapha ukuze zihlale
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 9, 2021
Abantu baseRiphabhlikhi bakhokele ikakhulu ityala ngokuchasene negunya lokubuyiselwa kwemaski, nangona ukuvota kubonakala kubonisa isabelo esilungileyo senkxaso yemaski kumacala omabini ezopolitiko, ngaphezulu kwesiqingatha seRiphabhlikhi besithi bazogquma ukuba bayagula, ngelixa i-80 % Iidemokhrasi zatsho njalo.
Ama-67% abantu baseMelika baceba ukusebenzisa iimaski eluntwini ukuba baziva begula.
Abantu abaninzi baseMelika bafuna ukuqhubeka nokuxhomekeka kwiimaski, nakwilizwe elisemva kobhubhane.
Ngaphezulu kwe-40% yabantu baseMelika abathi baya kunxiba iimaski "kwiindawo ezixineneyo" nasemva kobhubhane.
Ngokophando olutsha olwenziwe yiSchar School of Policy noRhulumente e University of George Mason, abantu abaninzi baseMelika bafuna ukuqhubeka nokuxhomekeka kwiimaski, nakwilizwe elisemva kwesifo.
Ngelixa kugunyazisiweyo ukwenza isigunyaziso kunye nezikhokelo ezihlaziyiweyo ezivela kwifayile ye- Centres for Disease Control and Prevention (CDC) bafumene ukushukuma okunzima kubagxeki, ipolitiki entsha ifumanise ukuba isibini kwisithathu sabantu baseMelika bazakuqhubeka nokuzifihla ukuba baziva begula, emva kwesifo se-coronavirus, kwaye ngaphezulu kwe-40% baya kunxiba ubuso 'kwiindawo ezixineneyo' nkqu nasemva kwe-COVID-19.
Ngokokuvota, kukhutshwe izolo, ama-67% abantu baseMelika baceba ukusebenzisa iimaski eluntwini ukuba baziva begula. Ekuqaleni kobhubhane entwasahlobo yonyaka ophelileyo, isikhokelo sokuqala seCDC kwiimaski yayikukunxiba kuphela ukuba uziva iimpawu zecoronavirus. Ukusukela oko babuye umva isikhokelo sabo semaski kubantu baseMelika abagonyelweyo, kwaye emva koko bahlaziya isikhokelo esithi imaski ziyafuneka, nokuba zigonyiwe, kwizinto abazibona njengeendawo ezinobungozi obuphezulu.
Ngaphezulu kwe-30% yabaphenduli bathe bazakufihla ukuba bayagula nje ukuba ilizwe lidlule kulo bhubhane. Ngaphezulu kwama-50% bathi ngekhe banxibe into yokugquma ubuso kwiindawo ezixineneyo, into eyacetyiswa ngamagosa ezempilo ngamanye amaxesha, ngakumbi kuseto lwangaphakathi, ngenxa yokwanda kwamatyala kwilizwe liphela kunye nokusasazeka kokwahluka kwedelta.
Ngaphezu kwe-40%, nangona kunjalo, bathi baya kunxiba iimaski "kwiindawo ezixineneyo" nasemva kobhubhane.
Umahluko phakathi kokuzibandakanya kwezopolitiko ubonakalise ngakumbi ekubuzeni malunga nokuba ingaba ubomi babaphenduli "bubuyele esiqhelweni" na, namazwe amaninzi kunye neendawo ezibuyisa umqobo kunye nokuvula amashishini kwakhona.
Kuphela yi-15% yabantu abazichaza ngokwabo ukuba zii-Democrats abathi ubomi babo "babuyile ngokupheleleyo," xa kuthelekiswa ne-48% yamaRiphabhlikhi. Ngaphezulu kwe-40% yeedemokhrasi bakholelwa ukuba ubomi babo buza kusuka ngokupheleleyo kubhubhane kunyaka olandelayo, ngelixa i-20% ikholelwa kuphela ezinye iinyanga ezintathu ezifunekayo. Abantu baseRiphabhlikhi banamathuba amaninzi, ngokophando, ukuba bazimase indibano yangaphakathi enabantu abaninzi kulo nyaka mtsha kunamaDemokhrasi, uninzi lwabo lusoyikayo ngamaqondo okugonya ashiyekileyo kunye nokwahluka.
I-poll yenziwa phakathi kwabantu abadala abayi-1,000 4 kwaye inemida yephutha lokudibanisa okanye ukunciphisa i-XNUMX%.
Amagosa ezempilo achithe iiveki ezidlulileyo ekhuthaza ukugonywa kunye nesilumkiso malunga nokunyuka kwamatyala e-coronavirus ekwindla. U-Anthony Fauci, umcebisi oyintloko kwezonyango kuMongameli uJoe Biden, ulumkise kule veki ukuba uyakholelwa ukuba iimeko ze-coronavirus zingafikelela kuma-200,000 ngosuku.
I-US inomndilili weentsuku ezisixhenxe ezihamba malunga nama-90,000 amatyala amatsha kule veki, ngokweenkcukacha zeDyunivesithi yaseJohn Hopkins, engaphezulu kwama-30% ngaphezulu komndilili weentsuku ezisixhenxe ezidlulileyo.
Iimoto zoLoliwe zaseThai ze-COVID-19 zezigulana ezingenayo i-AC okanye ...
Ukuhamba kunye nomsebenzi wokwenza ukhenketho ezantsi phantse i-7% ...
Iingeniso zokhenketho ezingama-2021 ezingaphantsi kwesiqingatha sangaphambi kobhubhane ...
Inyikima yaseHaiti yabulala ngaphezulu kwe-1400
I-Bhanki yase China ibhengeza ukuba zonke izivumelwano ze-crypto azikho semthethweni ...
Indawo eNtsha yoMnyhadala kunye neNkokeli eNtsha yokuThengisa
I-Canada Braces ye-Delta-Driven ye-4 ye-Wave ye-COVID-19 ...
Ukuvulwa ngokupheleleyo kwemida yase-US ukugonywa ngokupheleleyo ...
Ukudideka malunga nezatifikethi sokugonya kuthintela ukuhamba ...
Iipaki zeSizwe zaseUganda ziNdwendwela ngokuLula kubakhenkethi
Ukuya kwi-UAE, kubandakanya i-Dubai, i-India kunye ne-14 ...
IGuinea ikhuphe iManyano yase-Afrika ngenxa yomkhosi
Inye kwabahlanu eBrits yayiza kusebenza kwi-porn ukuba umvuzo wawulungile ...
Okungakumbi kubatyali mali baseBulgaria ...
Khwela iNtaba iKilimanjaro ngomyalezo wethemba
Iingcali eziphezulu zeswekile kunye nenkampani ye-AI eya eGuam
Ukuhlasela i-Turkey Wildfires kubangela ukuba abakhenkethi baKhuphe ...
I-Costco yokuqalisa kwakhona iphepha langasese kunye namanzi asebhotileni ...
Ukubhukisha uhambo oluya eHawaii ngoku bubomi nokufa ...
Ujongo lweNethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi kuKhenketho kunye nobuNqolobi
ISt. Helena yiBritane, iAfrika, ayinasimahla kwaye ngoku ...
Umsebenzi omtsha wokuqalisa umsebenzi eJamaniica ...
Ukhenketho lweMalta lwenza ukuba ukuHamba kubelula kubakhenkethi abavela ...
I-CEO eNtsha ithatha uncedo kwiiNdawo zokuHlala
UMphathiswa uBartlett: Ukubambelela ngokungqongqo kwi-COVID-19 ...
Ukubuyela kweTUI eJamaica kuya kuba ngumTshintsho oMkhulu woMdlalo
Amandla oluntu akhanya nge-IMEX America ...
Akukho zithintelo: iRussia iqala kwakhona iinqwelomoya ngeenqwelo ...
Idatha yedijithali yamkelekile eMalta yoKuhlala ixesha elide kunye ...
Iimbumbulu eziDutyuliweyo: Ukwakhiwa kwePentagon kwiLockdown
I-Delta Air Lines ithenga ngaphezulu kweenqwelo moya zeAirbus A30neo ezingama-321
I-United Airlines icwangcisa ishedyuli enkulu yasekhaya ukusukela ...
I-Airbus ihambisa i-A220 jet yokuqala kwiAir France
Iinqwelomoya zombane kunye neenyosi ezinkulu azikwazi ukubhabha
I-Seychelles ukuba yabelane ngokuqonda kweMozulu kwiNdibano ye-COP
Ukuqala kwakhona kwenqanawa: Iifowuni zeCarnival Sunshine eOcho Rios ...
IRum kukutya kwakho kobuchopho, utywala, kunye nendlela yokuphila yaseNew York
Ngaba ukugcinwa kwemihla ngemihla kwiihotele kufile ngokwenene?
IMauritius iphelisa ukuvalelwa yedwa kubakhenkethi abajongwa ...
IRashiya iphinda iqale i-Iraq, iKenya, iSlovakia neSpain ...
I-El Salvador yamkela i-Bitcoin njengemali yayo esemthethweni ...
Ukuqeshiswa kweeholide eHawaii: Kungcono, kodwa akukabikho
Iimbadada Iiholide ezibandakanya konke: Usapho luphela!
'Ilungelo lakho lokuFa kwi-COVID-19' kufuneka ...
UMphathiswa wezoKhenketho uXhelekile kukusweleka kukaJamaica Songbird
IiSandals Resorts: Ishumi leminyaka lokujongana neCaribbean